မြန်မာပြည်အတွင်း | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ စွမ်းအင်လုပ်ငန်း မှ | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာပြည်အတွင်း ရှိ စွမ်းအင်လုပ်ငန်း မှ
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ
Familiar with the procedures of relevant departments of Myanmar MIC Investment Committee, Customs and Ministry of Commerce, and good at communicating with Myanmar personnel
Business connect with the local government of Myanmar and related institutions; Prepare and maintain contract documents. Relevant contract negotiation and commercial public relations;
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : အကြံပေး နှင့် နည်းဗျုဟာပေး အလုပ်အကိုင်များ
Contract Management, proposing solutions and Project Management teams to support contract compliance.Commercial negotiation with Government Departments, Agent, other Companies etc.
Assist admin manager to ensure proper maintenance of office. Provide support including data-entry, recording, printing, filing duties and editing documents, keeping stock of stationary supplies. To carry out the translation and administration process in an efficient manner.
ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေး အလုပ်အကိုင်များ 1 စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ 1 အကြံပေး နှင့် နည်းဗျုဟာပေး အလုပ်အကိုင်များ 1 အင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ 1 အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1